डा.केसीको अवस्था बुझ्न र ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल चिकित्सक संघको टोली जुम्लामा - डा.केसीको अवस्था बुझ्न र ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल चिकित्सक संघको टोली जुम्लामा
डा.केसीको अवस्था बुझ्न र ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल चिकित्सक संघको टोली जुम्लामा
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २४ असार 89 Views
काठमाडौं । नवौ दिन देखि अनशनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितको टोली जुम्ला पुगेको छ ।
चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रा.डा. ढुण्डिराज पौडेल र सह कोषाध्यक्ष डा.प्रकाश बुढाथोकीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयू कक्षमा अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई भेटि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
देशभरका चिकित्सकहरुले हिजोे शनिबार देखि कालोपट्टी बाँधेर सरकारले परिमार्जनसहित ल्याउन लागेको चिकित्सा शिक्षा विद्येयकको विरोध गर्दै काम थालेका पौडेलले बताए ।
पौडेलले सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिइसकेको जानकारी दिदै सरकारले सुनुवाइ गरेन भने कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने बताए । डा.केसीको जीवनरक्षा प्रमुख माग भएको चिकित्सक संघका सहकोषध्यष डा। प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।